Baiboly pejy 671 - Ny Baiboly
Voalohany < 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 Manaraka Farany
2 Korintiana toko 13 (tohiny)
4Fa nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana aza izy noho ny fahalemena, dia velona kosa izao noho ny herin'Andriamanitra. Toy izany koa izahay, na dia malemy ao aminy aza, dia hiara-belona aminy koa; ka hahery ao aminareo, noho ny herin'Andriamanitra.
5Diniho ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana hianareo, na tsia; tsapao ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va, fa ao amin'ny tenanareo Jesoa-Kristy, afa-tsy raha olona tsy voazaha toetra hianareo? 6Manantena aho fa raha izahay, dia ho fantatrareo tokoa fa olona voazaha toetra izahay. 7Ary mangataka amin'Andriamanitra izahay, mba tsy hanao ratsy na inona na inona hianareo; tsy hoe mba hisehoanay ho olona voazaha toetra, fa ny mba hanaovanareo izay tsara, na dia ho heverina ho olona tsy voazaha toetra aza izahay. 8Fa tsy mahavita na inona na inona hanohitra ny marina izahay, fa ny hampandroso ny marina ihany. 9Hafaliana ho anay, raha izahay no malemy, fa hianareo kosa no mahery; àry izao indrindra aza no angatahinay amin'ny fivavahanay, dia ny hahatongavanareo amin'ny fara fahalavorariana. 10Izany no anoratako ireo zavatra ireo aminareo, dieny tsy mbola eo aminareo aho, fandrao dia voatery hanao mafy loatra aho, rahefa tonga, noho ny fahefana nomen'ny Tompo ahy, ho fananganana fa tsy ho fandravana.
11Farany, ry rahalahy, mifalia, miezaha ho lavorary, mifanalà alahelo, miraisa hevitra, mihavàna tsara, dia ho eo aminareo ny Andriamanitry ny fitiavana amam-piadanana. 12Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina. Manao veloma anareo ny olo-masina rehetra.
13Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompo, sy ny fitiavan'Andriamanitra, ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina!
Galata toko 1
Fiarahabana - Fananarana azy noho ny fivadibadihany - Ny Tompo ihany no nandraisan'i Paoly ny Evanjely.
1Paoly Apostoly, tsy avy amin'olombelona, na avy amin'ny alalan'ny olombelona, fa avy amin'i Jesoa-Kristy sy Andriamanitra Ray izay nanangana azy tamin'ny maty, 2mbamin'ny rahalahy rehetra izay ato amiko, mamangy ny Eglizy rehetra aty Galatia: 3ho aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana, avy amin'Andriamanitra Ray, sy Jesoa-Kristy Tompontsika, 4izay nanolo-tena noho ny fahotantsika, mba hanafaka antsika amin'izao andro ratsy izao, araka ny lahatr'Andriamanitra Raintsika. 5Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amena.
6Gaga aho raha dia mivadika faingana toy izao hianareo, ka ilay niantso anareo ho amin'ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy dia ialanareo hanatona Evanjely hafa indray. 7Tsy dia hoe misy Evanjely hafa akory anie, fa ny Evanjelin'ny Kristy ihany no tadiavin'ny sasany hovana, mba hampitabataba anareo fotsiny! 8Fa na ny tenanay, na anjely avy any an-danitra aza, ka mitory Evanjely hafa noho izay efa notorinay taminareo, dia aoka ho voaozona izy. 9Efa voalazanay taloha izany, sady mbola averiko indray ankehitriny, fa raha misy olona mitory aminareo Evanjely hafa noho izay noraisinareo, dia aoka ho voaozona izy. 10Ary ankehitriny, olombelona ve no ilàko sitraka sa Andriamanitra? Moa ny hamalifaly ny olombelona va no kendreko? Raha mbola mila sitraka amin'olombelona koa aho, dia tsy mpanompon'ny Kristy akory.
11Ampafantariko anareo, ry rahalahy, fa ny Evanjely izay notoriko taminareo, dia tsy mba avy amin'olombelona; 12fa tsy tamin'olombelona no nandraisako na nianarako azy, fa tamin'ny fanambaran'i Jesoa-Kristy. 13Efa renareo ihany ny toetrako fony aho mbola nanaraka ny fivavahan'ny Jody, fa nanenjika fatratra ny Eglizin'Andriamanitra sy nandrava azy aho; 14ary nandroso tamin'ny fivavahan'ny Jody mihoatra noho ny maro indray nihira tamiko teo amin'ny fireneko aho, sady fatra-pitàna ny lovan-tsofina avy amin'ny razako.
15Nefa, nony sitrak'Andriamanitra ilay nanokana ahy hatrany an-kibon-dreniko, sy niantso ahy tamin'ny fahasoavany, 16ny hanambara ny Zanany tato anatiko, mba hitoriako azy any amin'ny jentily, niaraka tamin'izay, dia tsy naka hevitra tamin'ny nofo aman-drà aho, 17na niakatra tany Jerosalema ho any amin'ny Apostoly talohako akory, fa lasa nankany Arabia, dia niverina ho any Damasa indray. 18Efa telo taona taty aorian'izany, vao niakatra hamangy an'i Piera tany Jerosalema aho, sy nitoetra tao aminy tapa-bolana. 19Fa ny Apostoly sasany, dia tsy nisy hitako afa-tsy Jakoba rahalahin'ny Tompo ihany. 20Izao zavatra lazaiko soratako aminareo izao anie, dia lazaiko marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy mandainga aho!
21Taorian'izany dia nankany amin'ny faritanin'i Siria sy Silisia aho. 22Tsy mbola nisy nahita tava ahy akory ny Eglizy rehetra tany Jodea ao amin'ny Kristy; 23fa vao ny lazako fotsiny no reny hoe: Ilay nanenjika antsika fahiny, dia indro ankehitriny, mitory ny finoana notadiaviny hofoanana taloha. 24Ka dia ny mankalaza an'Andriamanitra noho ny amiko no nataony.
14Vao hitako kosa fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinan'ny Evanjely izy ireo, dia i Sefasy no nilazako teo anatrehan'ny olona rehetra teo hoe: Koa hianao Jody aza re, nanaraka ny fomban'ny jentily, fa tsy ny an'ny Jody; ka ahoana no dia ahasahianao manery ny jentily hanaraka ny fomban'ny Jody? 15Taranaky ny Jody isika, fa tsy mba mpanota avy amin'ny jentily; 16nefa nony fantatsika fa tsy ny asan'ny Lalàna no anamarinana ny olona, fa ny finoana an'i Jesoa-Kristy, dia mba nino an'ny Kristy Jesoa koa isika, mba hohamarinina amin'ny finoana azy, fa tsy amin'ny asan'ny Lalàna, satria tsy misy nofo hohamarinina amin'ny asan'ny Lalàna.
Pejy: Voalohany < 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3603 seconds